Maxay Soomaaliya uga dhigan tahay wajiga koowaad ee deyn cafinta? - BBC News Somali
Image caption Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Agaasimaha Maamulka Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF, Kristalina Georgieva
Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay gaartay marxaladda u qalmidda deyn cafinta ee wadamada fakhriga ah. Soomaaliya ayaa noqoneyso wadankii 37-aad ee caalamka ee gaara heerkaan dayn cafinta.
Inkastoo qorshaha deyn cafinta ay tahay mid soo socotay oo ay soo bilaabeen xukuumadihii hore, haddana dowladda hadda jirta waxaa ay sheegtay in arrintan ay ku timid dedaal Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku bixisay dib u habeynta hey'adaha maaliyadda.
Hey'adda lacagta adduunka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay dedaal u gashay sidii ay usoo gaari lahayd halkan.
''Waxaan jeclahay in aan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo guusha ay ka gaareen dadaalkii ay sanadihii la soo dhaafay ku bixiyeen dib u habeynta maaliyadda oo halkaan na soo gaarsiyay," ayay tiri Agaasimaha maamulka hey'adda Lacagta Adduunka, Kristalina Georgieva.
Lahaanshaha sawirka IMF
Cabdi Cali Daakir oo ah khabiir arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku adkeyd in ay la macaamisho hey'adaha Lacagta Adduunka, maadaama dalalka caalamka oo dhan ee katirsan Qaramada Midoobay ay dhaqaalo ahaan ku xiran yihiin hey'daha hoostaga Bangiga Caalamka iyo IMF.
"Haddii lacag laguugu leeyahay ma weydiisan kartid bangiga adduunka iyo hey'adda lacagta adduunka wax lacag ah oo kale, waxaase jira lacag kale oo ay Soomaaliya amaahan karto sida lacagaha loogu talagalay mashaariicda horumarineed oo ay codsan karto iyo in ay codsan karto lacagaha lagu kabo miisaaniyadda", ayuu yiri Cabdi Cali Daakir oo la hadlayay BBC-da.
Mar wax laga weydiiyay in Soomaaliya ay deyn weydiisan karto hey'adda IMF iyo Bangiga Caalamka waxaa uu sheegay "inay adag tahay in Soomaaliya ay deyn qaadato illaa iyo inta ay kasoo dhameystireyso qeybaha kale ee deyn cafinta".
Ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in tallaabadan ay Soomaaliya u suuragalineyso in ay dib ula soo noqoto xiriirkii dhaqaale ee ay caalamka la laheyd.